Zimbabwe Currency Changes – Update – thompsonsafricadbn
Zimbabwe Currency Changes – Update
In further news received regarding the changes regarding currency in Zimbabwe, we are pleased to confirm that there will be no negative affect to the travelling public, specifically foreign visitors. Read the full statement below:
STATEMENT BY THE ZIMBABWE TOURISM AUTHORITY ON THE STATUTORY INSTRUMENT 142 OF 2019: RESERVE BANK OF ZIMBABWE (LEGAL TENDER) REGULATIONS, 2019
The Zimbabwe Tourism Authority would like to assure all visitors to Zimbabwe that the recently promulgated Statutory Instrument 142 of 2019: Reserve Bank of Zimbabwe (Legal Tender) Regulations, 2019 will not negatively affect the travelling public, specifically foreign visitors. The regulations are meant for any transactions carried out within Zimbabwe, where it is now illegal to use foreign in hard cash. The legal tender shall be the Zimbabwe Dollar in both cash and electronic format.
Any freely convertible foreign currencies remain acceptable in Zimbabwe as follows:
The Zimbabwe Tourism Authority has it from authoritative sources that reports circulating in certain sections of the social media purporting that police are authorised to stop and search people for foreign currency are untrue and should be dismissed with the contempt they deserve.
For any further information and/or clarifications and in cases of problems please contact the Head Corporate Affairs on +263 71 844 9067 and e-mail koti@ztazim.co.zw or any of the Zimbabwe Tourism Authority offices.
Anyone for a side car experience?